Ukukhohlisa izandla nge-Photoshop. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Silungiselele isifundo ukunika ubomi kwaye ukucoca ngesandla esinye ezingakhathalelwanga kakuhle.
Siqala ngefoto yesandla esingahoywanga kancinci. Kuxhomekeka kwindlela ejongeke ngokungakhathali amanyathelo afanayo.
Siza kugxila kwisikhonkwane esinye kwaye iya kuba ngumcimbi wokusebenzisa iindlela ezifanayo kwezinye izikhonkwane.
Sithatha isixhobo Ukugqithisa kwimenyu esekhohlo, kwaye kukhetho esilungiselela lona ukuze ibrashi ingabi nkulu kakhulu, ukuze Uluhlu loLwandle lweMidtoneskunye Ukubonakaliswa kube yi-13% okanye ngaphantsi. Ngoluqwalaselo senza ukudlula isikhonkwane esipheleleyo, ngaphandle kokuya ngapha nangapha, kube kanye kuphela kuba sifuna ukwenza into encinci zihlanjwe ziphelele isikhonkwane. Emva koko senza ibrashi incinci kwaye siyigqithise kabini okanye kathathu ngaphezulu komphetho wesikhonkwane, kule meko iya kuba kukuyikhaphukhaphu, ke iya kuba ngaphezulu kwakanye.
Ukuba sinombala kwithoni epinki okanye emthubi eyomeleleyo nakweliphi na icandelo lesikhonkwane, ungakhathazeki, sithatha ibrashi ngombala omhlophe kwaye ngobukhulu obuncinci kakhulu senza umgca emaphethelweni esikhonkwane. Emva koko siye kwimenyu Icebo lokucoca ulwelo-iBlur-iBlur Gaussian, kwaye siyinika ukufiphala malunga ne-3,7. Sinciphisa ukubonakala kwayo, phakathi kwama-50 nama-70% ukuze ingabi mhlophe kakhulu, yiyo loo nto!
Singasoloko sikopa ikhonkwane komnye umfanekiso kwaye siyibumbe ngokwethu, kodwa kuyonwabisa ngakumbi ukuzama ngale ndlela.
Ke sinokwenza kwakhona mhlophe amazinyo, njengoko sibonisile kwithuba elidlulileyo kwesinye isifundo. Obu buchule busetyenziselwa "ukucoca okumhlophe", kungasetyenziswa kuphela iinzipho, amazinyo, okanye amehlo, kodwa kwakhona ukuya Wall, okanye into ethile ukusuka ekhitshini, kwigumbi lokulala, kwigumbi lokuhlambela, kutheni kungenjalo ngebhayisikile okanye esinye isithuthi. Ngumbandela wokufumana into efotweni esicinga ukuba singayicoca kwaye siyisebenzise le nkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Ukukhohlisa izandla nge-Photoshop.
Inika umdla kakhulu. Ukucoca i-junk endala kwiifoto zam. ?